Sida loogu isticmaalo qashinka dib-u-warshadaynta si habboon. Baro midka loo adeegsado. | Cusbooneysiinta Cagaaran
Dib-u-warshadaynta qashinka, midabada iyo macnaha
Daniel Palomino | | Dib u warshadaynta
Mar kasta oo ay wax badan arkaan weelasha dib-u-warshadaynta waddada mar haddii dadku si tartiib tartiib ah u ogaadaan una bilaabaan inay Dib-u-warshadayn, inkasta oo kuwa cusub had iyo jeer ay jiraan shakiyo isku mid ah.
Maqaalkan waxaan ku sharxi doonaa dib-u-warshadaynta, sharciyada 5R, qashinka dib-u-warshadaynta iyo waxa dib loogu isticmaali karo mid kasta iyo wixii aan ahayn, marka lagu daro qaar ka mid ah qashinka dib-u-warshadaynta ee guriga, runtii dhibaatada ugu weyn ee ah in la bilaabo dib-u-warshadaynta booska Guriga.
1 Dib u warshadaynta
2 Sharciga 5R
3 Weelasha dib-u-warshadaynta
3.1 Weelka jaallaha ah
3.2 Weelka buluuga ah
3.3 Weelka cagaaran
4 Qashinka dib-u-warshadaynta guriga
Dib-u-warshadayntu waa nidaam ujeedadiisu tahay qashinka u beddelo alaab cusub ama haddii ay tahay isticmaalkeeda soo socda.
Nidaamkan oo si buuxda loo isticmaalo, waxa aan ka hortageyno waa adeegsiga agabyada waxtar u leh, waan awoodnaa yareeyo isticmaalka alaabta ceyriinka cusub dabcan waxay yareyneysaa isticmaalka tamarta abuuritaankeeda. Ka sokow, sidoo kale waxaan yareyneynaa wasakheynta hawada iyo biyaha (iyada oo loo marayo qashinka iyo qashin-qubka siday u kala horreeyaan), iyo sidoo kale yareeynta qiiqa gaaska lagu sii daayo.
Waa muhiim in dib loo warshadeeyo tan iyo markii qalabka dib loo isticmaali karo ayaa ah badan sida: qalabka elektarooniga ah, qoryaha, dharka iyo dharka, birta birta ah iyo kuwa aan birta ahayn, iyo waxyaabaha ugu caansan sida waraaqaha iyo kartoonada, dhalooyinka iyo caagagga qaarkood.
Dib-u-warshadayntu haddaba waa qayb muhiim u ah yareynta qashinka (waa mid ka mid ah dhibaatooyinka deegaanka ee aan hadda la kulanno) waana qeybtii shanaad ee 3Rs, xeerarka aasaasiga ah ee ujeedadoodu tahay in la helo bulsho sii waarta.
Iska yaree: Kuwani waa ficillada la qaaday si loo yareeyo soo saarista walxaha u nugul inay noqdaan qashin, iyadoo lagu cabbirayo iibsasho macquul ah, adeegsiga habboon ee alaabada ama iibsashada alaabooyin waara.
Waa dhaqankii ugu horreeyay ee ay tahay inaan ku darno gurigeenna tan iyo markii aan wax weyn u badbaadin doonno "jeebka" iyo sidoo kale boos iyo alaab dib loo warshadeyn karo.
Dayactirka: Waxaa jira waxyaabo aan dhammaad lahayn oo u nugul R. Tani waqtigii duugoobay ee la qorsheeyay ayaa ah mid ka soo horjeedda waana waxa ay tahay inaad la dagaallanto.
Wax walba waxay leeyihiin xal fudud marka horena waa inaan isku dayno inaan hagaajino wax soo saar kasta, ha ahaato alaabta guriga, dharka, qalabka elektarooniga, iwm.
Dib u isticmaal: waa ficilada u oggolaanaya dib-u-isticmaalka badeecad gaar ah inay siiso nolol labaad, iyadoo la mid ah ama adeegsi ka duwan.
Taasi waa, tallaabooyin loogu talagalay hagaajinta alaabada iyo kordhinta noloshooda waxtarka leh.
Kabasho: Waxaan ka soo ceshan karnaa qaar ka mid ah walxaha qashinka oo aan u kala saari karnaa si aan u siino adeeg kale, tusaale ahaan caam ahaan badanaa waa tan biraha oo laga kala sooci karo qalabka kala duwan ee aan tuurno dibna loo isticmaali karo.
Dib u warshadaynta: Hore ayaan u aragnay, waa howsha qashin uruurinta iyo howlaha daaweynta ee quseeya taas oo u ogolaaneysa in dib loogu celiyo meertada nolosha.
Kala-go'idda qashinka ee isha ayaa loo isticmaalaa in lagu bixiyo wadiiqooyin ku habboon.
Markaan intaas oo dhan idhi, waxaan u gudbeynaa qashinka dib-u-warshadaynta, taas oo sidaad ogtahay, kuwa ugu waaweyn ay yihiin 3, jaalle, buluug iyo cagaar.
Dadka ugu cusub ee tan ku jira iyo halyeeyga ugu badan laakiin wali shakiga qaar qaba, badanaa waxaa la sameeyaa dhowr jeer (sanadkiiba) ololaha waxbarashada deegaanka ama barnaamijyada qashinka iyo dib u warshadeynta, iyada oo ujeedadu tahay kor u qaadista wacyiga iyo ka warqabka saameynta deegaanka ee soo saarista qashinka, iyo sidoo kale tallaabooyinka u ololeeya deegaanka si loo yareeyo.
Ololahan ama barnaamijyadan waxaa badanaa sameeya Junta de Andalucía, Xiriirka Andalusia ee Dowladaha Hoose iyo Gobollada (FAMP), Ecoembes iyo Ecovidrio Waana wax weyn dadka inay bartaan sida dib loo warshadeeyo, maadaama ay jiraan dad badan oo maanta aan si buuxda u aqoon sida loo warshadeeyo.
Bogaggan waxay bixiyaan macluumaad iyo talo ku saabsan sida dib-u-warshadaynta loogu sameeyo qaab aad u fiican oo ah, si loo bilaabo dib-u-warshadaynta, waa inaan ogaanno waxa qashinka guryaha: waa kuwa ka soo baxa guryaha sababo la xiriira howlaha guriga.
Kuwa ugu soo noqnoqda waa hadhaaga walxaha dabiiciga ah, balaastigga, birta, waraaqaha, kartoonada ama weelasha dhalooyinka iyo kartoonada. Iyo, sida aad u aragto, ku dhowaad wax walba dib ayaa loo cusbooneysiin karaa.
Hordhacyadan yar ee aan soo bandhigay, waxaan hadda ku tagayaa halka ay run ahaantii muhiimka ka tahay: sida ugu habboon ee loo kala saari karo qashinka aan soo saarayno, tanna a kala soocid xulasho ah kaas oo ka kooban isku ururinta qashinka weel kala duwan iyadoo loo eegayo astaamahooda iyo hantidooda.
Hoos waxaa ku yaal dhammaan qashinka oo ay weheliyaan qashinka gaarka ah ee haanta kasta:
Weel dabiici ah oo hadhaaga ah: walxaha dabiiciga ah iyo weelasha kale ee laga tuuro.
Weelka jaallaha ah: weel caag ah oo fudud, kartoono, daasado, aerosols, iwm.
Buluugga buluugga ah: kartoonada iyo weelka warqadaha, joornaalada iyo joornaalada.
Weelka cagaaran: dhalooyinka quraaradaha, dhalooyinka, dhalooyinka iyo dhalooyinka.
Weelka saliida: saliid asal ahaan ka soo jeeda dalka.
Sigre Point: daawooyinka iyo xirmooyinkooda. Waxaa laga helaa farmasiyada.
Batariga weelka: badhanka iyo baytariyada alkaline. Waxaa laga helaa dukaamo badan iyo xarumo dowladeed.
Weelka dharka: dharka, dharka iyo kabaha. Jaaliyado badan ayaa leh weelal iyo adeegyo aruurin.
Weelka nalka lagu shido: nal (fluorescent), nalalka badbaadiya tamarta iyo LED-yada.
Weelka kale ee qashinka: weydii golahaaga magaalada meesha ay ku yaalliin.
Meel nadiif ah: qashinka waaweyn sida joodariyaasha, alaabada guriga, iwm., Haraaga ranjiga, aaladaha elektarooniga ah iyo qashinka guryaha halista u ah.
Hadda, kuwa ugu badan ee la isticmaalay waa weelasha guud (waxyaabaha dabiiciga ah), jaalle, cagaar iyo buluug maxaa yeelay waa qashinka aan inta badan soo saarno.
Weelka jaallaha ah
Waxaan mid walba u isticmaalnaa in ka badan 2.500 oo konteenar sanadkiiba, in kabadan nuskood caag ah.
Waqtigan xaadirka ah Andalusia (oo waxaan ka hadlayaa Andalusia maadaama aan halkaan ka imid oo aan sifiican u ogahay xogta) in ka badan 50% ee weel caag ah ayaa dib loo warshadeeyay, ku dhowaad 56% biraha iyo 82% kartoonno. Ma xuma haba yaraatee!
Hadda fiiri wareegga balaastigga iyo garaaf yar oo sawir leh, halkaas oo aad ku arki karto arjiga koowaad oo aad isticmaali karto dib-u-warshadaynta.
Si loo dhammeeyo weelkan, waa inaan dhahno qashinkaas MAYA U socoshada weelkan ayaa ah: warqad, kartoon ama weelal quraarado ah, baaldiyo caag ah, alaabta carruurtu ku ciyaaraan ama laalaadaan, CD-yada iyo qalabka guryaha.
Talo soo jeedin: Nadiifi weelasha oo sii dhig si aad u yareyso codkooda inta aadan ku dhex tuurin weelka.
Weelka buluuga ah
Markii hore waxaan aragnay waxa lagu shubo haamaha, laakiin maahan maxaa MAYA Waa in lagu rido iyaga xaalkiisana waa: xafaayadaha wasakhda ah, marooyinka ama unugyada, kartoonada ama xaashida lagu xardhay dufan ama saliid, aluminium iyo baakado, iyo sanaadiiqda daawada.
Eeg wareegga warqadda iyo xaqiiqo xiiso leh.
Talo soo jeedin: Isku laab kartoonka inta aanad weelka ku dhex ridin. Ha uga tagin sanduuqyada weelka.
Waa maxay MAYA waa in lagu rido weelkan: muraayadaha iyo koobabka ka samaysan madadaalada, dhoobada dhoobada, galaaska iyo muraayadaha, nalalka nalalka ama laambadaha dhaadheer.
Talo soo jeedin: Ka saar daboolka weelka dhalada ka hor intaadan u qaadin weelka maadaama ay si weyn u wiiqayaan habka dib-u-warshadaynta
Wixii kasta 3000 dhalo oo dhalo ah litir dib loo warshadeeyay ayaa badbaadin kara:
1000 kg oo qashin ah oo aan tagin qashinka.
1240 kg oo alaab ceeriin ah oo aan laga soo saari karin dabeecada.
U dhiganta 130 kg oo shidaal ah.
Iska yaree wasakheynta hawada illaa 20% adoo soo saaraya baakado cusub oo ka soo baxa muraayadda dib loo warshadeeyay.
Haddii aan ka soo baxno weelalkan oo aan aadno inta ugu badan ee la isticmaalo, ee ah walxaha dabiiciga ah, waxaan sidoo kale yareyn karnaa oo aan si wanaagsan u isticmaali karnaa tan maadaama xitaa walxaha dabiiciga ah loo beddeli karo compost, oo loo isticmaali karo compost.
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato compost waxaad booqan kartaa maqaalkayga oo ku yaal boggeyga gaarka ah «Shirka dib-u-warshadaynta iyo bacriminta iyo Aqoon isweydaarsi ku saabsan isku-darka bacriminta oo ah farsamo qiimeyn qashin ah» halkaasoo aad ku baran doontid muhiimadda ay leedahay compost iyo sida guriga loogu sameeyo marka lagu daro dhismaha qashinka compost.
Qashinka dib-u-warshadaynta guriga
Dhibaatada ugu weyn ee dad badani qabaan maahan jaahilnimada dib-u-warshadaynta ama dib-u-warshadaynta xun laakiin waa "caajisnimada" ka timaadda tagidda weelasha ama kala-goynta guriga, sababtuna tahay bannaan ama xaalad kale.
Haddii aad ka mid tahay kuwa meesha ka maqan, waxaad mar walba maarayn kartaa inaad awood u yeelato dib-u-warshadaynta si habboon, internetka waxaad ka heli kartaa fikrado ama talooyin badan oo aad kula jaanqaadi karto gurigaaga, qaarkood, waa run inay iyagu mashquul badan yihiin ama lacag ku kacayso laakiin had iyo jeer waa adiga kan go'aamiya dhamaadka.
Sidii aan idhi, waxay ku kacaan lacag sida qashin-qubka guryaha lagu isticmaalo. Waa tan ugu raaxada badan marka ay timaado shaqada, waxaad si fudud u iibsataa oo ugu isticmaashaa guriga.
Qaar kale waa sii faahfaahsan yihiin laakiin waa ka raqiisan yihiin kuwa aan hoos ku tusi doono.
Baaldiyo hore ama sanduuqyo kartoon ah waxaad ku samayn kartaa haamo dib u isticmaal sidaan ku sameeyay tusaale ahaan xagaagan iskuulada xagaaga ee aan ka soo shaqeeyay.
Aakhirka carruurtu waxay bartaan qiimaha dib-u-warshadaynta iyo xitaa in ka sii badan tan kale ee 'R' tan iyo markii aannu dib u isticmaalno maaddada si aannu u siinno adeegsi kale oo aan u yaraynno isticmaalkiisa.
Sida aad arki karto waxaa jira xalal badan, kaliya waa inaad heshaa midka kuugu haboon adiga.
Haddii si kadis ah aad aniga oo kale tahay, oo aan boos loo helin, waxyaabaha soo socdaa waxay la mid yihiin sida boorso weyn oo aad dusha ka saareyso mashiinka dharka lagu dhaqo oo aad ku ridi karto wax kasta oo dib loo warshadeyn doono oo markay buuxsadaan tag weelasha oo kala sooc isla halkaas.
Waan ogahay inay ka dhaqso iyo fudeyd badan tahay inaad tagto aagga weelka dib-u-warshadaynta oo aad wax walba iska tuurtid maadaama aad horay u kala soocday laakiin mid walbaa wuxuu haysto wuxuu haysto oo waxa ugu dambeeya ee ugu dambeeya ay tahay inaad dib-u-warshadayso.
Waxaan rajeynayaa inay kuu adeegtay oo aad yareyso, dib u isticmaasho oo aad dib u isticmaasho si aad nolol fiican u sameyso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Dib u warshadaynta » Dib-u-warshadaynta qashinka, midabada iyo macnaha